Daraasad soo bandhigtay hal arrin oo lamaaneyaasha shaqooyinka guriga isla qabta ay dheeryihiin kuwa kale - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Daraasad soo bandhigtay hal arrin oo lamaaneyaasha shaqooyinka guriga isla qabta ay dheeryihiin kuwa kale
Miyaad weli aaminsan tahay in shaqooyinka guriga, gaar ahaan daryeelka ilmaha inay tahay shaqada haweenka? Haddii aad aaminsantahay, waxaa laga yaabaa inaad wajahayso arrimo la xiriira guurka.
Sida laga soo xigtay baadhitaan ay sameeyeen cilmi baarayaal ka socda jaamacadda Georgia State University, wadaagidda daryeelka ilmaha ama caruurta ayaa lamaanaha ka dhigto kuwo ku qanacsan noloshooda dareen ahaan isla markaana ah mid kordhisa farxadda guurka.
Dadka ka qeyb qaatay daraasadda ayaa waxaa kamid ah lamaaneyaal u dhexeeya kuwo dhaqaale ahaan ama dakhli ahaan hooseeya iyo kuwo heer dhexe ah, iyadoo lamaaneyaasha la doortay ay ahaayeen kuwo leh caruur iyo xaasas kayar 45 sano jiro.
Cilmi baarayaashu waxay sheegeen in xiriirka ah mid haweeneyda ay qabato inkabadan 60% shaqada guriga in lamaanahaas sidii larabay uusan aheyn xiriirkooda iyo sido kale dhanka xalinta muranka dhex mara.
Si,kastaba, farxadda xiriirka isma bedeleyso haddii ninka uu qabto shaqo badan oo howsha guriga.
Dr Daniel Carlson, oo hogaaminayay daraasaddan ayaa sheegay in mid kamid ah natiijooyinka lagu ogaaday daraasadda ay tahay in daryeelka caruurta uu dhibaato ku yahay tayada xiriirka lamaanaha marka haweeneyda kaligeed ay qabato dhammaan waxyaabaha la xiriira daryeelka caruurta.
Hadaba, wadaagidda waajibaadka daryeelka ilmaha waa mid gurigaaga ka dhigeysa mid faraxsan.
6 Sababood oo Haweeneyda ay uga tagto ninka ay jeceshahay (Ninyohow iska ilaali)